Weerar Ka Dhacay Degmada Wajeer Iyo Shabaabul Mujaahidiin Oo Mas’uuliyadda Sheegtay. – Bogga Calamada.com
Weerar Ka Dhacay Degmada Wajeer Iyo Shabaabul Mujaahidiin Oo Mas’uuliyadda Sheegtay.
January 8, 2018 5:57 am Views: 201
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa sii kordhiyay weerarada ay ka fulinayaan gudaha wadanka Kenya iyo dhulka Kenya xooga ay kaga heysato Somalia.
Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa billaawga sanaddan 2018 waxay sedax jibaartay weerarada ay ka fulinayso Kenya taas oo caqabad hor leh ku noqday laammaha ammaanka dowladda Kenya.
Weerar hor leh ayaa lagasoo calaamadeeyay deegaan katirsan gobolka Mandheera oo maalmihii lasoo dhaafay si gaar ah bartilmaameed ugu ahaa ciidamada Al Shabaab waxaana deegaankaas lagu dilay tobaneeyo katirsan ciidamada Booliska Kenya.
Ciidamada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa la xaqiijiyay in ay beegsadeen xarun isgaarsiineed oo dowladda Kenya laheyd taas oo kutaal deegaanka Katulo sida ay sheegeen mas’uuliyiin iyo dad goob joogayaal ah.
Saraakiil u hadlay Booliska Kenya ayaa sheegay in Rag ay rumeysanyihiin in ay ka tirsanyihiin Xarakada AL-shabaab ay jareen Isgaarsiintii Magaalada Katulo ee Waqooyi Bari ayna burburiyeen matoorro dab dhaliyayaal ah iyo hanti kale oo dowladda Kenya laheyd.
Taliyaha Booliska Wajeer Stephen Ngetich,ayaa xaqiijiyay in xoogag aad u hubeysan ay Garneyllo ku dhifteen dhismaha Laanta Sharikadda isgaarsiinta Safaricom ee Magaalada Katulo waxaana burburtay anteenadii sahleysay wada xiriirka dadka degaanka iyo dalka Kenya intiisa kale.
“Alshabaab waxay burburiyeen xaruntii shirkadda Safaricom ee Katulo balse majiraan wax dhibaata ah oo ciidanka Booliska kasoo gaartay weerarka oo runtii dhulka dhigay anteenada shirkadda” ayuu yiri taliyaha Booliska Wajeer.
Wararka ayaa intaas ku daraya in weerarkani uu dhacay maalintii Axadda ee shalay, waxaa jarmay war isgaarsiintii u dhaxaysay ciidamada Kenya ee Katulo iyo magaalada Ceelwaaq ee xuduud beenaadka dhacda, dowladda Kenya waxay sheegaysaa in weerarada lagu qaadayo xarumaha isgaarsiinta ay noqdeen kuwa saameyn ballaaran yeesha iyadoo Alshabaab ku eedeysay in ay dagaalka dhan kale urogtay.
Stephen Ngetich, oo ah taliyaha Booliska gobolka Wajeer ayaa carrabaabay in weerarada soo noq noqday ee Al Shabaab ka geysanayso gudaha Kenya ay caqabad weyn ku yihiin amniga iyo ganacsiga gobolka Waqooyi Bari.
Mas’uuliyadda weerarkan ka dhacay degmada Wajeer waxaa sheegtay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin,waxeyna Mujaahidiin Wacad ku mareen in har iyo habeen sii kordhinayaan weerarada ka dhanka ah Saliibiyiinta Kenya.
Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weeraro silsilada ah oo 10 maalmood wax ka yar ka dhacay gobolka Waqooyi Bari waxaana kamid ahaa weeraro lagu dilay 6 askari iyo mid kale oo 30 askari dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen